WAR CUSUB: Chelsea oo heshiis la gaartay Alvaro Morata – Gool FM
WAR CUSUB: Chelsea oo heshiis la gaartay Alvaro Morata
Byare July 9, 2016
(London) 09 Luulyo 2016. Warar dhawaan gal ah ayaa tibaaxaya in naadiga Chelsea ay heshiis la gaartay dhaliyaha reer Spain ee kooxda Real Madrid Alvaro Morata.
War sidaha Don Balon ee dalka Spain ayaa sheegay in dhaliyihii hore ee Juventus Morata uu heshiis shaqsi ahaaneed la gaaray Blues.
Waxay u muuqataa inuu heshiiis shan sano ah la gaaray kooxda ku ciyaarta Gegada Stamford Bridge taa uu sanadkiiba ku qaadan doono 5.2-milyan oo bound oo ka baxsan lacagaha dheeriga ah iyo kuwa uu gunnada u helayo.
Chelsea ayaa laga soo diiday dalab hore oo 51.2-milyan oo bound laakiin Don Balon ayaa sheegeysa in Real Madrid ay ku dooneysa weeraryahankeeda 64-milyan oo bound.
Tababare Antonio Conte ayaa la filayaa inuu la soo laaban doono dalab kale oo ay aqbali doonaan kooxda ka dhisan La Liga taa oo ka dhigi doonta Morata laacibkii ugu qaalisanaa taariikhda ee ka soo jeeda dalka Spain.
Wuxuu ahaa mudnaanta koowaad ee Conta markii uu aqbalayay inuu qabto shaqada tababaranimo ee kooxda reer London wuxuuna tababaraha reer Talyaani u caddeeyay milkeele Roman Abramovich inuu doonayo saxiixa Morata.
Bishii la soo dhaafay Real Madrid ayaa miiska saartay lacagaha ay dib Morata ugala soo wareegeyso Juventus maadaama heshiiskii ay ku iibisay 2014-tii uu qeyb ka ahaa heshiis ay dib ugu soo iibsan karto labo sano gudahood.
Waxayna taa la micno tahay in lagu wado inay faa’iido wayn ka sameeyaan xiddig ay markii hore ku iibiyeen 17-milyan oo bound misane dib ugu soo iibsadeen 23-milyan oo bound.
23-jirka ayaa qeyb ka ahaa xulka Spain ee matalayay koobka Euro 2016 oo iminka soo gaaray Final-ka iyadoo xulka La Roja lagu reebay wareega labaad ee tartanka.
Caner Erkin oo Inter lagusoo dhoweeyay & shaxda laga yaabo inay galabta kula dheesho kooxda Wattens + Sawirro
Kubaddii uu Lio Messi ku khasaariyey gool ku laadkii fiinalaha oo la iibinayo. Yaa iibinaya, qiimehee lagu helayaa?